Posted by စိမ်း... 3.11.09
kiki November 3, 2009 at 8:18 AM
အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေ အပင်ပန်းခံ ဝယ်နေရသေး ။ over weight ကြေး နဲ့မကာမိ ဖြစ်နေဦးမယ် ။။
အဟေးဟေး ။ အလေးခံ သယ်မနေနဲ့ ဗျိုး....
ဟိုမှာလည်း အစိရှုံ .. အဲ.. .. အစုံရှိစ် .
ပြန်လာရင် ငပိ ။ လက်ဖက် ။ ဝယ်သာခဲ့ . အဟဲ့ဟဲ့..
မြန် မြန် ပျံလာ အူး ... နှော် ...း))))
အနော် November 3, 2009 at 8:54 AM
ခန အလည်ပြန်တာလား စိမ်းရေ
နှစ်ပတ်ကြာမယ်ဆို စားချင်တာ မှန်သမျှ အတိုးချပီး စားခဲ့နော်
ပီးတော့ ပရီးမီးယားအစိမ်းထုပ်လေးလဲ အဝသောက်ခဲ့ သိလား အနော့်ဆီတော့ ကုန်တွားဘီ :(
ရန်ကုန်ပြန်ခရီလေး သာယာပါစေ မီးမှန်မှန်လာတဲ့ရက်တွေနဲ့ချည်း တိုးပါစေ
ဝက်ဝံလေး November 3, 2009 at 9:20 AM
စားချင်တာမှန်သမျှ အကုန်စားခဲ့နော် သိလား လွမ်းနေမယ်နော် ဟီးးးး(ချွဲထားမှ)
စည်သူ November 3, 2009 at 9:33 AM
ကိုလူထွေး November 3, 2009 at 10:15 AM
ဧရာဝတီသား November 3, 2009 at 10:55 AM
ခရီးလမ်းပန်း အဆင်ပြေပါစေဗျို့ ..
မြစ်ကျိုးအင်း November 3, 2009 at 12:47 PM
ဖတ်တဲ့သူလည်း အထုတ်တွေ သယ်ရသလိုပဲ မောသွားတယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာက မျိုးချစ်မြန်မာနဲ့ တွေ့ခန်း သဘောကျတယ်။
Nge Naing November 3, 2009 at 5:04 PM
ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ အသက်တောင် ရှူမအားသလိုပဲ မောလိုက်တာ။ ဒါကြောင့် ပျောက်နေတာကိုး။ မြန်မာပြည်ကို ဘယ် Air Line နဲ့ ပြန်မှာလဲ။ မြန်မာ Air Line ဆိုရင်တော့ လေယာဉ်ပေါ် မတက်ခင် သဗ္ဗုဒ္ဓေ ဒါမှမဟုတ် ဒါရဏပရိတ်တွေ ရွတ်သွားနော့်။ လမ်းခရီး အသွားအပြန်မှာ ဘေး၊ ရန် အနှောင့်အယှက် ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
တလနွန် November 3, 2009 at 5:22 PM
နွေးနေခြည် November 3, 2009 at 5:22 PM
သံလွင် HeRo November 3, 2009 at 6:06 PM
ကတစ်ချပ်၊ ငပိကတစ်ဘူး၊ ဝယ်လာခဲ့ပေးပါနော့
ဒါဗြဲ....တာ့တာ့ HVaNICE TRIP :)
မချစ်ရ November 4, 2009 at 12:02 AM
chanye` November 4, 2009 at 1:52 AM
ငစိမ်းမ.. ပြန်လာရင် ငါ့ mp3 charger ယူလာဖို့မမေ့နဲ့နော်။ လက်မှတ်အားပေးတာ ကျေးဇူး ဟီးဟီး
လင်းဒီပ November 4, 2009 at 2:49 AM
့haveanice trip....သူ့စာဖတ်လိုက်ရတာ မောသွားတာပဲ ဝူး..။
jr.လွင်ဦး November 4, 2009 at 3:41 AM
သူက အိမ်ကို ပြန်ပြီး ပျော်နေတာကိုး။
ကောင်းကောင်းပျော်ခဲ့ ညီမလေး။း)
moemoestar November 5, 2009 at 12:17 AM
littlebrook November 6, 2009 at 11:30 PM
အော် ငါ့အမပျောက်နေလို့ လာကြည့်တာ သူကပြည်တော်ဝင် သီချင်းလေးဆိုပီး ပြန်လာပီကိုး :P
နွေးနွေးသဲမွန် November 8, 2009 at 8:04 PM
၀က်တားဒုတ်ထိုး ပိုချားခဲ့နော်...တိလား...ဟင့် :-'(
Angel Shaper November 16, 2009 at 1:36 AM
နက်ဖြန်ပြန်လာမယ်။ တွေ့ ကြမယ်ဟေ့။
yangonthar December 13, 2009 at 10:43 AM
မစိမ်းရေ အိမ်ကပြန်ရောက်ပြီလားဗျို့ကျနော်လည်း ပျောက်နေတာနဲ့မစိမ်းပြန် သွားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး ... အိမ်ပြန် ခရီးမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ မိသားစုနဲ့ အတူ သာယာ အေးမြပါစေဗျာ အိမ်ကပြန်လာရင်တော့ ကဗျာလှလှ တွေရေး ဖို့ မမေ့နဲ့ နောဗျ ....
အံမာ...... လိမ်လိမ်မာမာနေတဲ့ စိတ်ချ မမစိမ်းသာ သတိထား.. ပြောလိုက်ရ မကောင်းရှိရော့မယ် နေဦး ပြန်ရောက်တော့မှပြောမယ် အခုပြောရင် ပြန်လာလို့ တခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်အပြစ်တွေ ပုံကျမှာစိုးလို့ မပြောသေးဘူး။
littlebrook April 6, 2010 at 1:20 AM
အင်း ပြန်သွားတာ ပြန်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးထင်ပါ့ ..
အမစိမ်း စိမ်းသွားပြီလား ဘလော့ဂ်ကို :)
ဝတ်သမျှအစိမ်း၊ ဆင်သမျှစိမ်း၊ ပန်သမျှစိမ်း ၊ အစိမ်းရောင်ဆိုမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် မင်းသမီးရေ .... ဘလော့ဂါတွေကို စိမ်းကားသွားပြီလား .. သစ်စိမ်းချိုး ချိုးပြီး စိမ်းကားမသွားပါနဲ့ဗျာ ..ဟီ
ШР55П6НГ6Н вилка каб.с прям.кож. бРО.364.028ТУ ОТК Украина
Разъем а/магн. Volvo S40
Разъем RST20i3 96.033.6053.1 -96.033.6053.1 Запрос WE
Разъем а/м LG Есть
Win Zin Min Raja March 20, 2014 at 7:43 PM